Macnaynta maahmaahyooyinka W/D: Abwaan Maxamad Xuseen Faarax | Laashin iyo Hal-abuur
Macnaynta maahmaahyooyinka W/D: Abwaan Maxamad Xuseen Faarax
Waxay noqon doonaan qoromooyin taxane ah, oo Macnaynta maahmaahyooyinku
ku saabsan, oo aan hadba u soo gudbin doono, sida aan ammin u helo. Hadda waxaan idin la wadaagayaa afar maahmaayo iyo fasirkooda, oo ka la ah:
1: Hoosin, kaa dhugmo leh
2: Hoggaan hayaa howraar ma xajiyo
3: Haan miin tolkaa lagu ma guddoonsho
4: Hantaaturo horaan u socdey
1: Hoosin kaa dhugmaleh: inta aanan u gelin mahmaada macnaheeda, aan ku hormaro macnaha eraga ”HOOSIN”. Hoosin waxaa la yiraa owrta raran, oo geeddiga ah. Aan qayb ka soo qaato gabagii abwaan Garqaniinyo owrka ku ammaanayey, wuxuuna yiri:
“Waxaa loo hoydaa toban jirkii, hadawgu saarraaye
Isagaa hilkana qaadi kara, ho’na aan diideyne
Waxaana lagu hadiidaa intii, Reerku hayn jiraye
Hangoolka iyo halabadaad, horay u saartaaye
Goortii la HOOSIMO la mood, hogol daruureede
Hantaqaad u socoy sida asoor, huur ka soo baxaye”
Haddaan u soo laabanno mahmaahda macnaheedu waa: ”Reer guurayaa meesha uu u socdo, waxa ka jira isagaa kaaga ogaal badan” sababtoo ah, reer guurayaa labo ayuu mid yahay, ama waa “TAWAAN “DAN” U GUUR ama waa TIGAAD “DAAQ” U GUUR.”
Marka Haddaad aragto Reero geeddi ah, hala yaabin oo ha dhihin maxay lahkaas ugu guurayaan.
2: Goggaan hayaa howraar ma xajiyo: Macnaheedu waxa weeye, qof xoola wada, oo hoggaan haya, hadal ka ma bogan karo, oo sheeko u ma xoog helo.
3: Haanmiin tolkaa lagu ma guddoonsho: Aan ku hormaro macnaha eraga (HAANMIIR) Haanmiin ama rogrog waxaa la yiraahdaa, biyo yar oo lagu reerbo haamaha reer miyigu dhaansado. Waakii abwaan Faarax Shuuriye lahaa:
“Inta maw guryaha taal haddii, leysku wada MIIRO
Dheri iney madoobey karaan, waygu malo xoogle”
Macnaha mahmaahada: Reeraha miyiga is la deggan, ee wada aroora, badanaaba is ku mar biyuhu ka ma wada dhammaadaan. Haddii kuwa biyuhu ka dhammaadaan ay yiraahdaan war caawa aan aroorno, ma habboona kuwa HAANMIIRKU u haray, iney yiraahdaan caawa aroori meynnee, abeen dambe aan aroorno.
Nuxurka mahmaadu waa waxa aad haysato haddii aanu ku la haysan dadka ku la nooli, ha ku guddoomin, ee haysashadaada raac guddoonka ina aan wax haysan.
4: Hantaaturo horaan u socdey: Macnaha ”HANTAATURO” waa kuftin ku sigasho, marka adigoo meel ka degdegsan, oo saan boobaya, haddii aad hantaaturrooto, hantaaturradaasi waxba kuu ma dhibine, meeshii aad u socotey ayey kuu dedejisey.
Waxaa mahmaahdan loo adeegsadaa, wax adigu aad doonaysey qofkii kuugu darraada. Tusaale, adigoo dibadda jooga, oo doonaya inaad Soomaaliya aaddo, haddii laguu tarxiilo Soomaaliya, oo iyadoon wax qarashihi kaa bixin, gurigaagii aad imaato, waa HANTAATURRO HORAAN U SOCDEY.